Kulumkele ukufumana umhlaza wedlala lobudoda kunye nokutya kulandelayo Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Kunqande ukufumana umhlaza wedlala lobudoda ngoku kutya kulandelayo
Umhlaza wesibeletho ngowesibini ochaphazeleka kwinani labesilisa, ke kubalulekile ukuba unonophele kuthintelo lwayo. Khangela ukuba kukuphi ukutya okunokukunceda ukuthintela ukugula.
2 I-Brazil Nuts
3 Izityalo zeCruciferous
4 Itiye elihlaza
Iitumato zixhaphake kakhulu kwaye esinye sezizathu eziphambili kukungafani kwazo. Ukongeza, ukutya kutyebile kwi-lycopene, i-antioxidant enamandla amakhulu okukhusela iiseli zeprotate ngokuchasene notshintsho oluyingozi, njengokuphindaphindwa okungalawulwayo okwenzeka ekukhuleni kwethumba.
I-Lycopene ingcono ifunxwe ngumzimba xa iphantsi kwamaqondo obushushu aphezulu, ke kuyacetyiswa ukuba ubilise iitumato, uzigcobe, okanye uzikhonze njenge-sauce.
I-nut yaseBrazil eyaziwayo kwaye imnandi ityebile kwi-selenium, izimbiwa ezinamandla aphezulu e-antioxidant anceda ukuthintela umhlaza. I-Selenium inokufumaneka kwisixa esikhulu kukutya okufana nomgubo wengqolowa, izikhupha zamaqanda kunye nenkukhu.
Imifuno yeCruciferous, enje nge-broccoli, icauliflower, ikhaphetshu, ihlumelo laseBrussels, kunye nekhaphetshu, zonke zityebile kwi-sulforaphane kunye ne-indole-3-carbinol (antioxidants) kwaye inokuba ngamadlelane abalulekileyo kumlo wokulwa nomhlaza webele.
Iti eluhlaza, ekwabizwa ngokuba namandla ayo okunciphisa kunye nokukhawulezisa imetabolism, ityebile kwii-isoflavones kunye neepolyphenols, zombini ezizezakha mzimba. Ezi zondlo zifumaneka nakwiziqhamo nakwimifuno, iisoyi, kunye newayini ebomvu.
Inyama yentlanzi emhlophe yenye yezona ndawo zityebileyo ze-omega-3, uhlobo olulungileyo lwamafutha ane-anti-inflammatory action kunye ne-antioxidant. Ke ngoko, ukusetyenziswa kwenyama yentlanzi kunokuba luncedo ekuthinteleni umhlaza wedlala lobudoda. Inketho elungileyo yikhowudi.
Ukutya oku-10 okulikhoboka kakhulu
Ithanga leoyile yembewu yioyile entsha yekhokhonathi